Ungazikhuphela njani izixhobo zeDaemon kwaye ziyintoni | Izikhokelo ze-Android
Ungazikhuphela njani izixhobo zeDaemon kunye nokuba zezantoni
UDaniel Gutierrez Arcos | 11/05/2021 11:42 | IiApple zeApple
Ngomnye wabalingisi beemifanekiso ezisemgangathweni, ukuba sisixhobo esisetyenziswa ngokubanzi kwiWindows ukunqanda ukusebenzisa iCD / iDVD kwaye ngaloo ndlela wenze i-drive ebonakalayo. Izixhobo zeDaemons zibandakanya iindlela ezininzi ukunqanda ukukhuselwa kwekopi ngelo xesha kunzima.
Ngezixhobo zeDaemons kunokwenzeka ukuba kwiminyaka embalwa edlulileyo ukulayisha i-ISO ngonqakrazo olumbalwa lwempuku, isasebenza ngaphandle kwenyani yokuba inguqulelo yamvanje yakhutshwa ngo-Agasti 8, 2019. Esi sicelo yayikukuphuculwa kwesoftware eyaziwayo ebizwa ngokuba yiGeneric Safedisc emulator, owatshintshwa sisicelo esaziwayo.
1 Zithini izixhobo zeDaemon?
2 Izixhobo zeDaemon
3 Iinguqulelo ezintathu zeDaemon Izixhobo
4 Izixhobo zeDaemon zikwanenguqulo yeMac
5 Ungazikhuphela njani izixhobo zeDaemon
Zithini izixhobo zeDaemon?
Izixhobo zeDaemon sisicelo sokwenza iidrive zeCD kunye neeDVD ngaphakathi kwidiski enzima, yonke into ngokungathi yidiski ebonakalayo. Ngale sicelo saziwayo, umsebenzisi uya kuba nakho ukubandakanya ukwenza ugcino kwi-hard drive ukujonga umxholo ngalo naliphi na ixesha.
Isixhobo ngalo lonke eli xesha sigqibelele ukukwazi ukulayisha zonke iintlobo zeefayile ze-ISO, phakathi kwazo, umzekelo, uninzi lwabadlali bebhola bayonwabele le sicelo. Isasebenza ngokufanayo njengoko yayisenza ngelo xesha kwaye konke ngokufaka iyunithi yawo nawuphi na umdlalo wevidiyo, iimuvi kunye nezinye iifayile.
Ukugcina nayiphi na ifayile, iyenza ukuba ibe sisicelo esifanelekileyo, ikwasebenza njengesifakeli kwikhompyuter, ikwanobunzima obuncinci kwaye ujongano luchanekile. Zimbini iinguqulelo, enye yinguqulelo esemgangathweni, ngelixa uneLite enobunzima obuphantsi.
Izixhobo zeDaemon sisixhobo sokubonisa umfanekiso wediski ngaphandle kokuyifunda rhoqo, esenza ukuba ibaluleke namhlanje. Ngaphandle kokungahlaziywa, usetyenziso luguqulelo olukhuselekileyo olunokusetyenziswa, kuba alunabugs kwaye luzinzile xa lusetyenziswa.
Izixhobo zeDaemon zisebenza ngolu hlobo lulandelayo:
Inesakhono sokwenza iidrive ezibonakalayo kunye nokufaka imifanekiso kwi-ISO, CUE, MDS kunye nezinye iifomati ezininzi zokulinganisa idiski yeCD / DVD.
Unokwenza imifanekiso eyi-4 ebonakalayo ngexesha, isebenza ukuba ufuna ukwenza umdlalo ngamnye, inkqubo, njl.
Hlela yonke imifanekiso, eli nqaku libalulekile ngakumbi ukubona ukuba kufuneka ilawulwe yonke
Amandla okwenza imifanekiso yakho kwiidiski, ugcino lubalulekile, ngakumbi ukuba ufuna ukugcina loo mdlalo ngalo lonke ixesha kwaye ube nakho ukurekhoda kamva kwidiski
Ukudalwa kweefayile ze-VHD, ikhonteyina ye-TrueCrypt kunye neediski ze-RAM, kuyakwenza ikhompyuter ebonakalayo ngaphandle kwesidingo sokuba nenye ngaphakathi kwenethiwekhi
Ukwazi ukutshisa iidiski, isixhobo seDaemon yezixhobo ilungiselela yonke into ukukopa ngokulula kunye nokurekhoda, ishiya umfanekiso ugqibelele kwaye ucocekile
Izixhobo zeDaemon zikwangumbhali wememori ye-USB, ejika ipendrive ukuba iqaleke kwaye ilungile ukuba ufuna ukwenza intetho yeefayile
Ukubamba!: Ngaphandle kwentambo siya kuba nokufikelela kwiifolda ekwabelwana ngazo kwiWindows, nakwizixhobo eziphathwayo ukuba zinxibelelana
Iinguqulelo ezintathu zeDaemon Izixhobo
Imbali yezixhobo zeDaemon ibanzi kakhulu, yaqala malunga neminyaka eli-15 eyadlulayo Kwaye kudala sisixhobo esikhethwe zizigidi zabantu. Ixesha elingaphezulu lisungulwe ngenxa yombono olula, ukuba nokukhuphela ngaphezulu kwesigidi se-50 kwisithuba esingaphantsi kweminyaka emibini.
KwiWindows, abasebenzisi baya kuba nakho ukuxhamla ukuya kuthi ga kwizicelo ezithathu, eyokuqala yazo iDaemon Izixhobo zeLite, esona sinobunzima obuncinci kwaye sonke sinentengiso. Kusimahla, inyusa iifayile ze-VHD kunye ne-TrueCrypt, Yenza imifanekiso, ulinganise izixhobo ezine kwaye ubuncinci i-SCSI.
Kukho uguqulelo lokususa intengiso ngexabiso elimiselweyo lee-euro ezingama-4,99, uhlaziyo luya kuza ukuba uthenga le app kwaye inokufakwa kwiikhompyuter ezi-3. Ukuba ufuna ukuyifumana ukuze usetyenziselwe urhwebo, indleko iya kunyuka malunga ne-5 euro ngaphezulu, ke iyakubiza malunga ne-10 euro kwinkampani / kwinkampani.
Ezinye iinguqulelo ezimbini zizixhobo zeDaemon Pro kunye nezixhobo zeDaemon Ultra, eyokuqala inexabiso nge-50 euro yelayisensi yobomi. Inguqulelo ye-Ultra ibiza i-euro ezingama-55, ilayisensi ingunaphakade kwaye yenye yezona zigqibeleleyo, inokusetyenziselwa imeko oyifunayo, ekhayeni nakwingcali.
Izixhobo zeDaemon zikwanenguqulo yeMac
Abanini bekhompyuter eneMac Os X baya kuba nakho ukuyisebenzisa ngokuba nohlobo olunye Izixhobo zeDaemon, ezisebenza njengeWindows. Kukho uhlobo lwasimahla olufana neLite kwiWindows, ngelixa ufuna ilayisensi ngaphandle kwentengiso kuya kufuneka uphume ngaphandle ngee-euro ezingama-5.
Ukuba ufuna ukufumana ezinye iilayisensi, kuya kuncitshiswa i-euro enye kwikhompyuter nganye, nganye ibiza malunga nee-euro ezingama-4, namhlanje ngexabiso elifikelelekayo. Unokongeza ezinye iindlela zokhetho, phakathi kwazo zezi zilandelayo:
Irekhoda eyiyo, isishicileli sediski, i-RAM, umfanekiso omtshaUmqalisi we-ISCSI, i-USB eqalekayo, izixhobo ezingenamda, kunye nokudityaniswa kwe-Finder. Ukuba ufuna yonke imisebenzi, ipakethe epheleleyo iya kubiza malunga ne-24,99 euro kwaye ukusetyenziswa kwayo akunanjongo yorhwebo, ke kungcono ukuba ubuze umphuhlisi ngayo.
Ungazikhuphela njani izixhobo zeDaemon
Kubalulekile ukwazi ukuba uzikhuphele njani izixhobo zeDaemon emva kokwazi ukuba yenzelwe ntoni, isicelo esisebenzayo sokulingisa iidiski kwaye emva koko usebenzise imifanekiso. Ukujongana nabaliqela kubo kunokwenzeka kwaye kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe imidlalo yevidiyo yekhompyuter, nokuba yiWindows okanye iMac.
Zonke iinguqulelo ezintathu zeWindows zinokukhutshelwa ngephepha lonjiniyela apha, nganye yazo iza nesindululi ukuyifaka. Ixabiso lePro kunye ne-Ultra lingahluka njengoko kukho izibonelelo okwethutyana, ke kuya kuxhomekeka lonke ixesha elithile ukuba unezinto ezifanayo okanye ezisezantsi.
Ukuba ungumsebenzisi we-Mac Os X, unokuzikhuphelela uguqulo lwezixhobo zeDaemon ukusuka aphaKuya kuxhomekeka ekubeni ufuna ezinye izinto ezongezelelweyo ngokuthenga ipakethi epheleleyo, nangona inguqulelo yokuqala isenza zonke iziseko. Izixhobo zeDaemon zisetyenziselwa ukwenza kunye nokunyusa imifanekiso yediski, zonke ngendlela elula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » IiApple zeApple » Ungazikhuphela njani izixhobo zeDaemon kunye nokuba zezantoni
Jonga iprofayili yabucala kwi-Instagram, ngaba kunokwenzeka?
24 Imidlalo ebalulekileyo ye-Android ongenakuphulukana nayo kwiselfowuni